Ulwazi oluqokelelweyo www.itstechschool.com okanye i-www.itstraining.in igcinwa yimfihlo kwaye ayidluliselwe kwimibutho yabanye kwimicimbi yokuthengisa okanye yokunyusa.
Ukuba ufaka isicelo okanye ubuze malunga neenkonzo zethu okanye inkambo yeenkcukacha kuthi kuthi ufuna ulwazi xa wabelana ngedilesi yakho ye-imeyile kwimeko apho unako ukufumana ii-imeyile ezivela kuthi ngokumalunga neenkonzo esizibonelayo. Ukuba awunqweneli ukufumana i-imeyili enjalo sicela usisixelele info@itstechschool.com kwaye awuyi kufumana nayiphi i-imeyile ezayo evela kuthi.
I-innovative Technology Solutions iye yamisela abathengisi beentengiso ukubonelela ngolwazi kunye nemibono kwimibono. Xa ubuza nge-ITS, impendulo yethu iya kukopishwa kubameli beendawo kwaye ungayifumana i-imeyile evela kubo ukunikezela ngolwazi olungaphezulu.
Ngenxa yokuthengisa kunye ne-imeyile yokupasa i-imeyile yokusebenzisa i-spam filters, kungenzeka ukuba i-imeyile yethu ayinakufika ngaso sonke isikhathi. Ukuqinisekisa ukuba imibuzo yethu ayifanele ihambe ingalindelekanga, sithumela i-imeyile yokulandelelana (usebenzisa enye idilesi ye-imeyile Admin@itsgroup.in in case we do not receive a read report or a reply to our email.
Innovative Technology Solutions isebenzisa ii-cookies, iipekseli zokulandelela kunye nobuchwepheshe obuhlobene. Sisebenzisa ii-cookie ezityhutywe kuthi okanye abantu besithathu kwiinjongo ezahlukeneyo kubandakanywa nokusebenza kunye neyebhusayithi. Kwakhona, i-cookie ingasetyenziselwa ukulandelela indlela oyisebenzisa ngayo isayithi ukujolisa kwiintengiso kuwezinye iiwebhusayithi.
Iinkcukacha zonke zamakhadi zekredithi / zemali kunye nolwazi oluchongiweyo luya kugcinwa, luthengiswe, lwabelwana, luqeshwe okanye luqeshwe kunoma yimuphi umntu wesithathu.
Iipolisi zeeWebhsayithi kunye neMigqaliselo nemimiselo zingatshintshwa okanye zihlaziywe ngezinye iinkcukacha ukuhlangabezana neemfuno nemigangatho. Ngako ke abaThengi bakhuthazwa ukuba bavame ukutyelela la macandelo ukuze kuhlaziywe malunga noshintsho kwiwebhusayithi. Ulungiso luya kusebenza ngomhla othunyelwe ngawo.
Ezinye zezikhangiso ozibonayo kwiSayithi zikhethwe kwaye zithunyelwa ngabanye abantu, njengethungelwano lwee-ad, ii-arhente zentengiso, abathengisi, kunye nababoneleli bamacandelo abaphulaphuli. La maqela angaphandle angaqokelela ulwazi malunga nawe kunye nemisebenzi yakho ye-intanethi, mhlawumbi kwiSayithi okanye nakwezinye iiwebhusayithi, ngokusebenzisa ii-cookies, ii-beacons zewebhu, kunye nezinye ubuchwepheshe kumzamo wokuqonda iimfuno zakho nokuzithumela izikhangiso ezihambelana neemfuno zakho. Nceda ukhumbule ukuba asinakho ukufikelela, okanye ukulawula, iinkcukacha ezi zintathu zingabutha. Iinkqubo zolwazi zala maqela asithathu azifakwe ngolu hlobo lomgaqo-nkqubo.
Nayiphi na ingxabano okanye ibango elivela kuyo okanye ngokumalunga nale website liyakulawulwa kwaye lenziwe ngokuhambelana nemithetho ye-INDIA
I-India lizwe lethu lokuhlala.
Ukuba wenza inkokhelo yemveliso okanye iinkonzo zethu kwiwebhusayithi yethu, iinkcukacha oceliwe ukuba zingenise ziya kunikwa ngokuthe ngqo kumniki-ntlawulo wethu ngokuxhunywa olukhuselekile.
Umnini wekhadi kufuneka agcine ikopi yeerekhodi zokuthengisa kunye nemigaqo-nkqubo yomthengisi kunye nemithetho.
Sivuma iintlawulo kwi-intanethi usebenzisa i-Visa ne-MasterCard kwikhariti / i-debit card kwi-USD, i-GBP, i-EUR, i-AED ne-INR.
Xa iifizi zokubhalisa zihlawulwa, akuyi kubuyiselwa imali.
Iindleko zekhosi ziza kubuyiselwa.
Ukubuyiselwa kwemali kuya kwenziwa kuphela ngeNdlela yoNyathelo yeNtlawulo.
Imirhumo yemfundo inokubuyiselwa ukuba siza kufumana ingxelo kwiiyure zokuqala ze-4 zoqeqesho.